Who are they?: April 2008
ကျနော် မြင်တာကို၎င်း၊ တွေ့ တာကို၎င်း၊ သိတာကို၎င်း၊ မြင်သူတွေကတဆင့် သေသေချာချာ ကြားတာကြောင့် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ရေးလိုက်တာပါ။ စကားထောက်၊ စကားကျန်၊ စာကျန်ရင် ပြင်ဖတ်ပေးဖို့နဲ့ မရည်ရွယ်ပဲ ထိခိုက် ရေးသားမိတာတွေ ပါရှိခဲ့ရင် နားလည်ပေးဖို့ တောင်းပန်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့်၊ ပြည်တွင်းက တိုင်းရင်းသား မြန်မာလူမျိုးအားလုံးကို မေးသင့်သလို၊ ပို၍ ထပ်ပြီးမေးသင့်သည်မှာ ပြည်ပ နဲ့ ပြည်တွင်း က ဒီမိုကရေစီ ဘက်တော်သားတွေ၊ ခေါင်းဆောင်ကြီးများတွေ၊ လေလှိုင်းတွေပေါ်မှာ မိုးလုံးထွားစွာ ပြောနေသောသူတွေ၊ ဆင်ဖမ်းမယ်၊ ကျားဖမ်းမယ် ဆိုသောသူတွေကော၊ အရင်ကတော့ ဘာဖြစ်တယ် ဘာဖြစ်တယ် ဆိုပြီး အခုတော့ ရ၅% ဘဲ ရတာလေးကို ဘဲယူပြီး ရသလောက် နေရာလေးဝင် ထိုင်ချင်သောသူတွေရယ်၊ ပြည်သူတွေဆန္ဒဘဲ ဆိုပြီး ပြည်သူကို အမြဲတမ်း ခေါင်းပြန်တင်ကာ စကားလှလှလေး သုံးပြီးတော့ ကိုယ်မနာရင်ပြီးရော ဆိုသော ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ ကို ပြည်သူ တစ်ယောက်အနေနဲ့ပြတ်ပြတ် သားသား မေးရတော့ မဲ့အချိန်ကိုရောက်ပါပြီ။
ဘာလို့လည်းဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းတွင် နေထိုင်သော တိုင်းရင်းသားတွေကို မြန်မာ တပါတီ အာဏာရှင်စံနစ်ကို မကြိုက်လို့ ၊ ကြိုးနီစံနစ် ကိုင်တွယ်တာကို လုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူး ဆိုတာရယ်၊ လွတ်လပ်ခြင်း၊ တရားမျှတခြင်း၊ ညီမျှခြင်း၊ ဥပဒေစိုးမိုးခြင်း။ တို့ အခြေခံပြီး ပြည်သူကတင်မြှောက်သော ဖဒရယ်ပြည်ထောင်စုအစိုးရပေါ်ပေါက်ရန် ၁၉၉၀ပြည့်နှစ်က မဲပေးတင်မြှောက်ပေးထားပြီးပါပြီ၊ ပထမဦး ဆုံးသောပြည်သူတွေ လုပ် ဆောင်ရသောအပိုင်းတာဝန်ကို ကျေပြွန်စွာဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ တာဝန် ကျေခဲ့ပြီးပါပြီ။
ဒီမိုကရေစီအစိုးရကို လိုချင်လွန်းလို့့ယနေ့ထိ စစ်အစိုးရရဲ့ စံနစ်တကျ နှိပ်ကွပ် ဖိနှိပ်ခြင်းအောက်မှာ အံကြိတ်ခံ ရင်း အနှစ် ၂၀ တိတိ ခံလာရတာတောင်၊ ကျွန်တော်တို့ တင်မြှောက်ထားသော ပြည်တွင်း ကကိုယ် စား လှယ်တွေ၊ပြည်ပကကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ခေါင်းဆောင် တွေကဘာလို့ ပြတ်သား သော၊ နောက် ဆက် တွဲ ကိုမရှိနိုင်သောအခင်းအကျင်း၊တိုက်ပွဲကိုဘာလို့ မလုပ်နိုင်ကြတာလည်း ဆိုတာကိုပါ။ ဘာလို့ ပြတ်ပြတ် သားစကားလုံးနဲ့ ၊ဘာပြီးရင်ဘာဆက်လုပ်မယ်၊ ဘာမဖြစ်ရင်ဘာလုပ်မယ်၊ ဘယ်လို့ ကြေငြာပြီး မလုပ်နိုင်ရတာလည်း၊
ပြည်သူက ဘယ်သူကို ခေါင်းဆောင်တင်ပြီး၊ ဘယ်သူ့ စကား ကို ယုံကြည်ပြီး လိုက်ရမှာလည်း။ ပြောကြပါအုံး။ ပြည်သူက ကန့်ကွက်မဲပေးပြီ ဆိုပါတော့၊ ကျွန်တော်တို့ တိုက်ပွဲက ပြီးသွားပြီလား၊ ဘယ်နှစ်နှစ်အတွင်း ဒီမိုကရေစီ ရမှာလည်း၊ ပြောပါ။
ဒီလို မေးတာက ပြည်သူအများစု ရဲ့ တကယ့်ရင်တွင်းမှာ က စစ်အစိုးရက လုပ်သောဆန္ဒခံယူပွဲကြီး ကို လည်းလုံးဝ မဖြစ်မြောက်စေချင်သလို ၊ အခြေခံဥပဒေကြီးကိုလည်းလုံးဝသဘောမတူဘူး ဆိုတာကိုတော့သိထားပါ လို့ ပြောပါရစေ.။
ဘာလို့ ဒီ ဆန္ဒခံယူပွဲကြီးကို မဖြစ်မြောက်အောင်လုပ်ဆောင်ကြ၊ ကန်ကွက်ကြ၊ တော်လှန်ကြ ကျွန်တော်တို့ အားလုံး လည်းပြည်သူရှေ့မှာ အခုပြောတဲ့အချိန်ကစပြီးရှိတယ်၊ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင် ပြတ်ပြတ်သားသား တွန်းလှန်တယ်ဆိုသော အကြမ်းမဖက်သော ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒပြပွဲကြီးလုပ်ပြီ ဆိုတာတောင်မကြေငြာရဲတော့ ဘူလား။
မြန်မာနိုင်ငံက အနှစ်၆၀ကျော်ကြာ ရှည်လျား ဆိုးဝါးလှတဲ့ ပြည်တွင်းစစ်များ အလွန်၊ အကြမ်းဖက်ဝါဒများ ခေတ်စားလာနေတဲ့ ဒီကနေ့ကမ္ဘာမှာ ကျနော်တို့ဘက်က အကြမ်းမဖက် အနုနည်းသက်သက်နဲ့သာ စစ်အာဏာ ရှင်တွေ ကို တောက်လျှောက် ဆန့်ကျင်လာခဲ့တာပါ။ ဘယ်နှစ်ခါကများ စစ်တပ် ကတိတည်တာကို ရှိခဲ့ဘူးလည်း၊ ပြောရင်ပြောသလို၊ ဂတိက၀တ် ကိုကျေတယ်ဆို တာ ဘယ်မှာရှိသလည်း၊ သူတို့ ကိုယ်တိုင် ရေးပြီး၊ ပြည်သူကို လိုက်လံချပြ စည်းရုံးရေးခဲ့သော မြန်မာ့ဆို ရှယ်လစ် အခြေခံဥပဒေကြီးကို တောင်၊ စာအုပ်ထဲကတခြား ၊အပြင်လက်တွေ့က တခြားလုပ် ဆောင်ခဲ့ကြတာ၊ပြည်သူကို ဘာကိုမက်လုံးတွေ၊ မဟာနိုင်ငံရေးအဘိဓါန် တွေပြောပြီး၊ ဘာလို့ ဒုက္ခ ခဏခဏ ပေးချင်ရတာလည်း ဆိုတာကိုလည်း သတိပြုကြပါအုံး ခင်ဗျား။
အားလုံးလဲ ပြတ်ပြတ်သားသား မေးရတော့မယ့် အခြေအနေ အချိန်အခါ ကျရောက်နေပြီဖြစ်လို့ပါ။
မပြတ်သားရင်တော့ ကျနော်တို့ မပြီးနိုင်သောပန်းချီကားကြီးကို ရေးဆွဲသွားကြရတော့မှာဖြစ်ပြီး ပြည်သူ တွေကြား ထဲ ယခုထက်ပိုဆိုးဝါးတဲ့ အထွေထွေကြပ်တည်းမှုတွေ၊ ဆုံးရှုံးမှုတွေ၊ အကျင့်ပျက် လုယက် တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ ဖြေရှင်းမနိုင်အောင် ဆက်လက်ပြီး ရင်ဆိုင်သွားကြရတော့မယ်ဆိုတာ မြေကြီး လက်ခတ် မလွဲပါဘူး။
ဒီလာမယ့်ဆန္ဒမဲပေးပွဲဟာ ဘယ်လိုရလဒ်တွေပဲထွက်ထွက် အများပြည်သူအဆင့်ထိ ပြန့်နှံ့သွားပြီဖြစ်တဲ့ တရား လက်လွတ် ဓါးမိုးအုပ်ချုပ်မှုနဲ့ အနိုင်ကျင့်စော်ကားမှု အဓမ္မစရိုက်တွေက အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆီ ဦး တည်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ မနင်းရင်တော့ အနင်းခံရမှာပဲ ဆိုတဲ့အသိနဲ့ အားထားလုံခြုံရာ ဥပဒေ အစောင့် အရှောက်ကင်းမဲ့မှုတွေက ပြည်သူကို ချောင်ပိတ် အရိုက်ခံနေရတဲ့ ခွေးတွေပမာ ခံစားလာ စေရ လိမ့်မှာဖြစ်သလို၊ ဘယ်ကမှ အကာအကွယ်မရနိုင်ရှာတဲ့ အဲဒီပြည်သူတွေရဲ့ဘဝက စစ်အာဏာရှင်တစုနဲ့ သူတို့ရဲ့နောက်လိုက်တွေ ပြုသမျှ နုရတော့မယ့်အခြေကို လုံးလုံးလျားလျား ဆိုက်ရောက်သွားတော့မှာပါ။ လက်ရှိ အင်အယ်ဒီ အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ ဒီမိုကရေစီ ဘက်တော်သားတွေကို အနိုင်ကျင့် ရိုက်နှက်ပြပြီးတော့ ပေးနေ တဲ့ သတိကိုက ပြည်သူတွေ နင်းမှာလား အနင်းခံမှာလား ဆိုတာပါ။
တကယ်တမ်းတော့ အများပြည်သူမလိုလားတဲ့ နအဖဘက်က သူ့ဖွဲ့စည်းပုံအဆင့်ဆင့်နဲ့ စနစ်တကျ သူဖြစ်ချင် တာသူ လုပ်ယူဖန်တီးသွားနေခဲ့တာ အရာရာအောင်မြင် ပြီးမြောက်လုပြီဖြစ်ပါတယ်။ တရားတယ် မတရား ဘူးဆိုတာထက် အနိုင်အရှုံး အဖြေက ရလဒ်ကို ဦးဆောင်သွားတော့မယ့် အချိန်မှာ ဘယ်သူမှ ဘာမှမတတ် နိုင်ကြတော့တာဟာ အမြင်အားဖြင့်ကို ရှုံးနေပါပြီ။
အဲဒီအဖြေထွက်တဲ့အထိ စောင့်ကြည့်မနေသင့်တော့တဲ့ အချိန်မှာ နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းတွေ၊ သုံးသပ် ချက်အလှည့်အပြောင်းတွေ၊ သံတမန်ရေးရာနည်းလမ်းတွေ၊ ဒေသတွင်းပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေ၊ နိုင်ငံတကာ စာနာမှုတွေ အားလုံးကို ခေတ္တခဏဘေးဖယ်ထားပြီး ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ ပြည်တွင်းရေးကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျပါဝင်ဖို့ လိုပါတယ်။
ကန့်ကွက်မဲဝင်ထည့်ပြန်ရင်လဲ နအဖရဲ့လုပ်ရပ်ကို အသိအမှတ်ပြုပြီးသားဖြစ်သွားမယ်။ မဲမပေးပဲ နေမယ်ဆိုရင်လဲ ရသမျှနဲ့ အနိုင်ပိုင်းသွားတာခံရမယ်။ ရှုံးရှုံးနိုင်နိုင် နအဖဘက်က အုပ်စုဗိုလ်အနေနဲ့ အသာစီး က ဆက်ကစားလို့ ရသွားတော့မယ့် အခြေအနေမှာ၊ ဒီပွဲက ကန့်ကွက်တာမဲများခဲ့ရင် အခြေခံဥပဒေ အတည်မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အတွက် အမျိုးသားညီလာခံကို ပျော်ပျော်ကြီးပဲ ပြန်လည်စတင် ကျင်းပ သွားဦးမှာ ဖြစ်ပြီး မဲဝိုင်းထည့်တဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ အသိအမှတ်ပြုမှုတို့အရ အဲဒီညီလာခံကို သပိတ်မှောက်ထားတဲ့ အင် အယ်ဒီအနေနဲ့ နအဖစိတ်ကြိုက် ခင်းကျင်းထားတဲ့ အမျိုးသားညီလာခံအခြေပြု အနာဂတ်နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်မှာ လမ်းဘေးကို ရောက်သွားရပါလိမ့်မယ်။ ဒါက တချက်ခုတ်နှစ်ချက်ပြတ် အင်အယ်ဒီကို မြောင်းထဲပို့နေတာပါ။
ကလိမ်ကကျစ်ကျပြီး ထောက်ခံမဲတွေအရ လမ်းညွှန်မြေပုံခုနှစ်ဆင့်အတိုင်း နောက်နှစ်နှစ်အကြာမှာ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲကြီး ဝှဲချီးကျင်းပခွင့် ရသွားလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ အတိုင်းထက်အလွန် တံခွန်ထက်ကုက္ကား နအဖများဘက်က လက်ခမောင်းခတ်ကြတော့ဖို့ပါပဲ။
၁၉၉၀ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်က လုံးဝဥဿုံပျက်ပြယ်ပြီး ကြံ့ဖွံ့က နအဖလိုလားတဲ့ ဦးဆောင်ပါတီကြီး တခုအဖြစ်နဲ့ အမျိုးသားညီလာခံကတဆင့် အဲဒီအခြေခံဥပဒေ လူလားမြောက်အောင် နအဖနဲ့ အတူလက်တွဲ ဝိုင်းကူဆွဲပေးခဲ့တဲ့ တစည အပါအဝင် တိုင်းရင်းသားပါတီတွေ ခြံရံထွက်လာပြီးတော့ တကြော့ပြန် လက်ရှိ ချန်ပီယံ အင်အယ်ဒီနဲ့ အားစမ်းပွဲလုပ်မလား။
အဲဒီ လမ်းညွှန်မြေပုံခုနှစ်ချက်အရပဲ ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင် နိုင်ငံတကာနဲ့ အခင်းအကျင်းက လှသွားလိုက်တော့ ရှေ့ဆက်တိုင်းပြည်ရဲ့ အနာဂတ်က အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ မြောက်ကိုရီးယား အမွှာပူးကလေးဖြစ်လာမယ်။ လိင်ဖျော်ဖြေရေးအလုပ်သမတွေ အပါအဝင် လူသားအရင်းအမြစ်တွေ အမြောက်အမြားထုတ်လုပ်ပေးလာမယ့် နိုင်ငံတခုကို အိမ်နီချင်းနိုင်ငံတွေက ဝမ်းသာအားရ လက်ကမ်းကြိုဆိုနေကြမှာပါ။
စစ်အာဏာရှင် စံနစ်ဆိုးအောက်က လွတ်မြောက်လိုသူတိုင်း နဲ့ လွတ်မြောက်စေလိုသူတိုင်း ငါလုပ်မှ၊ ငါပြောမှ၊ ငါကြံခါမှဟုတ်မှန်အောင်မြင်ရမယ်ဆိုတဲ့ အထွေထွေအတ္တတွေထဲက လွန်မြောက်နိုင်ဖို့ အရေးကြီး လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ပြိုင်တူတွန်းလျှင် ရွေ့နိုင်ပါသည်ဆိုပေမယ့် အခြားတဖက်မှာတော့ ဦးတည်ရာ ညွှန်ရပ်တွေက တကွဲတပြားဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ ဘယ်ကိုတွန်းမှာလဲ၊ ဘယ်အထိရောက်အောင်တွန်းရမှာလဲဆိုတာ ဥပဒေကဲ့သို့ အာဏာတည်သော အမိန့်မျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ရွေ့ချင် ရွေ့ ရွေ့ချင်မှလဲရွေ့ ဘယ်တော့မှလဲမရွေ့ နဲ့ပဲ တော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲအစား ပရိုပိုဆယ်လိုက်ပွဲကလေးနဲ့ ကျေနပ်သွားကြတော့မလား။
နိုင်ငံတကာရဲ့ အသိအမှတ်ပြုခံရမှုများစွာတွေက ဖေါ်ကျူးစာဖွဲ့ မကုန်နိုင်အောင်ပါပဲ။ အသိ အမှတ် ပြုခံလိုခြင်းဆိုတာ သာမန်လူသားတိုင်းရဲ့ ကိုယ်စီအတ္တလို့ဆိုပေမယ့် အများအကျိုးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းရပ်တွေမှာတော့ လူလားမမြောက်သေးတဲ့ ကလေးကလားဆန်ဆန် ခံယူချက်မျိုးလို့လဲ စိတ်ပညာရှုထောင့်က အဓိပ္ပယ်တမျိုး ဖွင့်ဆိုပြန်တာမို့ ဘုရားရှင်နဲ့ အရိယာသူတော်စင်များမှလွဲရင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့လို အာဇာနည်မျိုးတွေမှာသာ အဲဒီအတ္တက ကင်းလွတ်နိုင်ကြတာပါ။ အဲဒီ ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဟာ ခေတ်သမိုင်းအဆက်ဆက် ဘယ်တော့မှလဲ သတ်၍မသေတဲ့ လူစွမ်းကောင်းများ ဖြစ်ကြ ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေယုံကြည်တာကတော့ အကျယ်ချုပ် ကျထားသောဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဦးတင်ဦး၊ နဲ့ ထောင်ထဲ ရောက်နေသော ဦးဝင်းတင် နဲ့ နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်တွေ၊ ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေ သာလျှင်ပြည်သုကို ပြတ်သားသောစကား၊ ဘာလုပ်တော့၊ ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာကို ပြောရဲလုပ်ရဲသောသူတွေ ဖြစ်ပြီး၊ ပြည်သူတွေနဲ့ တသားတည်း ရှေ့ကနေဦးဆောင် သူုတွေဆိုတာတွေပါဘဲ။ သူတို့ ကသာ အပြောနဲ့ အလုပ်ကို တထပ်တည်း ကျအောင်လုပ်ခဲ့သော၊ လုပ်သွားသော၊ နောင်လည်း ဆက်လုပ်မယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်လည်းစစ်အစိုးရကသူတို့ ကို ထိန်းသိမ်းထားတာကပြန်မလွတ်တာပါ၊
သိုပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ ရဲ အထဲကိုရောက်သော၊အထိန်းသိမ်းခံရသော၊ အကျယ်ချုပ်ကြခံရသော သူတွေမသိခဲ့သောအချက် က သူတို့ လောက်တောင် ကျန်သုတွေက ပြည်တွင်းမှာရော၊ ပြည်ပမှာ မလုပ်ရဲ မပြတ်သား ရဲ ကြ ရတာရယ်၊ ပြည်သူကိုဦးဆောင်နိုင်မှုမပေးနိုင်ဘူး ဆိုတာကိုအနှစ် ၂၀ ထိထိ သေသေချာချာ သဲသဲကွဲကွဲ မသိရသေးလို ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေဝမ်းနည်းစွာ ယခုတွေ့ ကြရတာပါ။
အခုက ပြည်တွင်းကရော၊ ပြည်ပကဆရာတွေကကော လုပ်နေသော အလုပ်ကိုမြင်သည်မှာတော တိုက်ပွဲ ဝင်မည် ဟုအော်ရင်း ။ လိုက်ပွဲများပါ ၀ိုင်းပြင်နေတာကိုတွေ့ မြင်နေရတာကလည်းမြင်တွေ့ ရပါတယ်။
အာဇာနည်မျိုး သေရိုးမရှိ လို့ ဆိုပါတယ်။
တိုက်ပွဲကိုပြတ်ပြတ်သားသား ဝင်မှာလား။ ဒါမှမဟုတ်ရင် လိုက်ပွဲတွေကို ၀ိုင်းပြီးတော့ ပြင်မှာလား။
ရက်စွဲ ၊ ၉ရက် ဧပြီလ ၂၀၀၈
Posted by Who are They? at 1:22 AM 1 comments